kanye wuxuu leeyahay albumkiisa cusub, nolosha pablo, waligiis kuma jiri doono muusikada tufaaxa ama itunes
Ugu Weyn Ee Wararka & Dib U Eegista Kanye ayaa sheegay in albumkiisa cusub, Life of Pablo, uusan waligiis ka jiri doonin Apple Music ama iTunes
Kanye ayaa sheegay in albumkiisa cusub, Life of Pablo, uusan waligiis ka jiri doonin Apple Music ama iTunes
Waxay u egtahay in macaamiisha Apple Music iyo dadka isticmaala iTunes aysan heli doonin ama ka iibsanin wax muusig ah Kanye West & apos; cusubNolosha Pabloalbum. Habeenkii Isniinta, farshaxanka duubista ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray 'albumkeyga waligiis waligiis ma noqon doono Apple. Weligoodna iib ma ahan ... Waxaad ku heli kartaa oo kaliya Tidal. ' Qaybta dambe waa adeegga muusikada qulqulka ah oo uu qayb ka yahay Jay Z.
Kanye & apos; s tweet harkens waxay dib ugu laabanaysaa go'aanka Taylor Swift & apos; ee ah inaysan u oggolaan albumkeeda1989si aad uga sii qulqulatid Apple Music. Swift waxay ka dhiidhinaysay go'aanka Apple & apos; ee ah in aan la siinin xaquuqda fanaaniinta, soo saarayaasha iyo calaamadaha muusigga ee la sii daayo inta lagu jiro mudada tijaabada ah ee seddex bilood ee bilaashka ah & apos; Apple markii dambe wey ka noqotay mowqifkeedii, iyo Swift wuxuu u oggolaaday albumka inuu ka dul maro Apple Music .
Farqiga halkan ayaa ah in inta Swift ay isku dayeysay inay hormariso sababta dhamaan muusikiisteyaasha, wax ay u sacab tumayeen asxaabtooda, Kanye wuxuu umuuqdaa inuu tan u sameynayo inuu ku hormariyo shaqsiga uu ugu jecelyahay aduunka oo dhan.
Waxay maalmo qariib ah ku noqotay Kim Kardashian seygeeda & apos; Toddobaadkii dhammaaday, Kanye wuxuu ka muuqday SNL, wuxuu ku soo qoray inuu isagu yahay $ 53 milyan oo deyn ah, wuxuuna u diray codsiyo isdaba joog ah calaamadaha Mark Zuckerberg iyo Larry Page. Wuxuu weydiistey aasaasaha Facebook $ 1 bilyan.
Dhawaan, Apple waxay shaacisay inay haysato 11 milyan oo macaamiil ah oo mushahar qaata Apple Music . Shakhsiyaadka ayaa bixiya $ 9.99 bishiiba, halka qoyska oo leh ilaa lix xubnood ay bixin doonaan $ 14.99 bishii.
Nolosha Pablo laguma sii dayn doono Apple Music ama lagu iibin maayo iTunes
xigasho: @kanyewest adoo adeegsanaya AppleInsider
waa galaxy s6 firfircoon biyuhu
ma oneplus 5t ka shaqeeyaa verizon
Tilmaamaha hadiyadda ee Maalinta Aabbaha & apos; 2018: Kusoo qaado burooyinkaaga hadiyad farsamo
Cusbooneysiinta soo socota ayaa Star Wars: Knights of the Old Republic ka dhigi doonta barnaamij guud oo iOS ah
Halkan waxaa ku yaal sida loo xoojiyo taageerada Adobe Flash ee Android 5.0 Lollipop
Khibrad dareerida batteriga daran ee Gear S3 ama Gear Sport? Isku day hagaajintan ku meel gaarka ah
Samsung Galaxy Watch 3 dib u eegis
Beats Solo3 sameecadaha dhageysiga ee wireless-ka ah oo la heli karo illaa $ $ 140, Beats Studio 3 waxay helayaan $ 70 qiimo dhimis
The Dead Walking: No Man & apos; s Cusbooneysiinta Dhulka waxay ku dareysaa khariidad cusub, horumarin badan
OnePlus 7/7 Pro iyo OnePlus 7T waxay helayaan casriyadoodii ugu dambeysay ee Android 10 kahor intaan Android 11 dhicin
Dhacdada Apple & apos; ee bisha Maarso waxaa ku jiri kara samaacado cusub, iPod taabashada iyo waxyaabo kale oo badan
Tilmaamaha Badbaadinta Madadaalada - 8 qosol badan oo Netflix ah takhasus gaar ah oo majaajillo ah si loo arko inta lagu jiro go'doominta